Global Voices teny Malagasy » Tambajotran’i Kaokazy: Momba ny Fiteny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Desambra 2013 11:17 GMT 1	 · Mpanoratra Mari Bst Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Raha tsaraina amin'ny fampitam-baovao zarainy amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy, ny mpiserasera manerana an'i Kaokazy Avaratra dia mirona hamaky vaovao amin'ny teny rosiana – indrindra moa fa io no fitaovam-piasan'ny famoaham-baovao ao amin'ny faritra. Ao Dagestan irery ihany no nisy ezaka maromaro fampandrosoana sehatra tsy miankina amin'ny teny rosiana. Ny roa amin'ireo sehatra ireo miavaka indrindra dia ny Radio Liberty branch  sy ny Ria-News division , izay samy miasa amin'ny fiteny Avar . Ankoatra izay, misy vavahadin-dahatsary, AVAR TV , vao nivoaka, izay manoloatra fantsona ho an'ny olom-pirenena haneho hevitra amin'ny fahafaha-mamokatra votoaty ôrizinaly amin'ny teny Avar.
Nahavita asa goavana i Timur Agirov, izay fantatra ao amin'ny LiveJournal ho Timag82 , tamin'ny fanisana ny famahanam-bilaogy amin'ny fiteny tsy rosiana tao Kaokazy Avaratra, nanambatra tahirin-kevitra manokan'ny  antontanisa hanaovana an-tsarintany ny fiteny isan-karazany. Manoratra amin'ny teny rosiana avokoa ireo zato voalohany ao amin'ny lisitr'i Agirov.
Mitovitovy amin'ny ao Dagestan ny tontolon'ny bilaogy ao Tsetsenia, na dia misy aza vitsy azo marihana izay manasongadina ny fanoratana tsy amin'ny teny rosiana, tahaka ny asa amin'ny fiteny roa an'i Gilani Lamaro , mpisera LiveJournal svd-1986 , ary i Mukhammed Yusupov .
Any Ingushetia, mampiasa ny tenin-dreny ny bilaogera na dia tsy matetika kokoa aza. Iray amin'ny ohatra maningana mampiasa fiteny roa rehefa mibilaogy i Abu-Umar Sakhabi ao amin'ny LiveJournal. Mirona kokoa amin'ny teny rosiana ihany koa ny bilaogera any Circassia, na dia mety hahita maningana any ihany koa ianao, tahaka ny Circassian-language  fahanan'i Astemir Shibzukho sy i Avraham Shmulevich .
[…] tsy mivelatra loatra ny voambolana sy ny voambolana manokana [na siantifika] amin'ny teny ao an-toerana. Sarotra ny miresaka toekarena, na ny teorian'ny zavakanto, ny fizika quantum amin'ny fiteny Tabasaran  eny fa na amin'ny fiteny Avar aza.
Tsy mitovy hevitra amin'izany ny bilaogera Ramazan Radzhabov, ary milaza fa any an-kafa no misy ny fanazavana izany. nandresy lahatra izy fa afa-mivelatra mamokatra voambolana vaovao hampitana zava-tsarotra. Manampy ny bilaogera hafa Mukhamed Avarski : 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/23/55799/
 fiteny Avar: http://en.wikipedia.org/wiki/Avar_language
 tahirin-kevitra manokan'ny: http://kavkazblogs.timag82.com/2.shtml
 Manampy ny bilaogera hafa Mukhamed Avarski: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Favarskij&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6TfyvXssD3cqVJYtyZW-t37-Zzw